१ सय ८ अंकसहित घटेर करेक्सन समातेको नेप्सेको आगामी यात्रा कस्तो रहला ? | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
१ सय ८ अंकसहित घटेर करेक्सन समातेको नेप्सेको आगामी यात्रा कस्तो रहला ?
२०७८ भाद्र २७, आईतवार ०७:२८:००
केही समययता सेयर बजार घट्दो क्रममा रहेको छ । बजार सूचक तल झरेको छ । अधिकांश कम्पनीहरुको मूल्य घट्दा बजार पुँजीकरण पनि तल झरेको छ । करिब ३२ सय विन्दुको पुगेपछि बजारको करेक्सन यात्रा सुरु भएको हो । अल्पकालीन कारोबारीले नाफा बुक गर्नु, यही बेला केन्द्रीय बैंकको पुँजी बजार विरोधी नीति निर्दैशन आउनु बजार घट्नुका प्रमुख कारण हुन् ।
तर करेक्सन यात्रा सुरु भएको पनि लामै समय भएकाले अब विस्तारै नेप्सेले रिबाउन्स गर्ने विश्लेषणहरु भइरहेका छन् ।
यस्तै, अरु केही विश्लेषकहरुले भने बजार अझै केही समय सुस्त हुन सक्ने वा साइड वेजमा पनि जान सक्ने बताइरहेका छन् । सेयर बजारको आगामी गतिहरुका बारेमा विभिन्न विश्लेषण भइरहँदा आम लगानीकर्ताले भने विशेषगरी कम्पनीहरुको भाउमा ध्यान दिनुपर्छ ।
कतिपय कम्पनीको भाउ ६ महिनाअघिको अवस्थामा आइसकेको छ । लाभांशको सिजन चलिरहेको छ ।
बाली थन्क्याउने बेलामा सर्वसाधारण लगानीकर्ता होसियार हुन आवश्यक छ । सबल वित्तीय सूचक भएका कम्पनीहरु छानेर लाभांश केन्द्रित हुँदै लगानी गर्न अनुभवीहरुले सुझाव दिने गरेका छन् । सेयर बजारमा बेलाबेला करेक्सन हुन्छ ।
यो स्वभाविक प्रक्रिया हो । यसले बजारलाई थप बलियो बनाउँछ । तर करेक्सन हुँदैमा वियरिस यात्रा सुरु हुने होइन ।
अहिले पनि बजारमा बुल रन जारी नै रहेको छ । किन भने सबैभन्दा धेरै पुँजी भएको र नेप्सेमा अधिक हिस्सा ओगट्ने बैंकिङ समूहको भाउ बढेकै छैन । सबैभन्दा ठूला हिस्सा ओगट्ने समूहको सूचक वृद्धि नभएसम्म बुल रनको यात्रा समाप्ति हुन नसक्ने अनुभवीहरुको भनाई छ ।
साताको सेयर बाजर
यस साता सेयर बजारमा रोचक पक्षहरु देखिएका छन् । साताको पहिलो आइतबार नेप्से सूचकमा १०८.२६ अंकले गिरावट देखियो । यस्तै, सोमबार पुनः एकै दिनमा १६१.९४ ले वृद्धि हुँदै नेप्से रिबाउन्स भएको थियो । त्यसपछि, नेप्से पुनः घट्दो क्रममा गयो । नेप्से सूचक गत साताको तुलनामा १.७३% ले घटेर बिहीबार २८७५.९८ विन्दुमा बन्द भएको छ । बिहीबार ७.०५ अर्ब रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ भने बजार पुँजीकरण ४० खर्ब भन्दा बढी कायम भएको छ ।